(ဂ) တစ်ချို့သောပုဂ္ဂိုလ်များ ကမူ ဤကဲ့သို့ အတင်း စေခိုင်း ခြင်းမှာ သူ လောကသို့ အမြန် ဆင်းကြွ လာမည်ဟုယူဆပြီး၊ တဒင်္ဂအတွက် သာ ဖြစ်သောကြောင့် မကြွဆင်းမှီ ခဏတဖြုတ်အတွင်း ကျင့်သုံးရန် သွန်သင်ထားခြင်းဖြစ်သည်ဟု ခံယူကြသည်။ ယေရှုသည် (၁၀)နှစ် ကာလအတွင်း၌ ပြန်လည် ကြွဆင်းမည် ဖြစ်၍ ခေတ္တခဏ အတွက် ပြင်းပြင်း ထန်ထန် မှာထားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည် ဟု ယုံကြည်သည်။ ဤသို့ ယုံကြည်သူများအနက် (Dr. Albert Schweltzer) သည် နာမည်ကြီးသူ တစ်ဦးဖြစ်သည်။ သူသည် ယခုခေတ်အတွက် သွန်သင်ထားခြင်း မဟုတ်ဟု ဆိုသည်။ (ဃ) တစ်ချို့ပုဂ္ဂိုလ်များက တောင်ပေါ်တရားတော်သည် လူတိုင်းအတွက် မဟုတ်၊ ခရစ်ယာန်တိုင်းအတွက်လည်း မဟုတ်ပါ၊ အမှုတော်ဆောင်များ အတွက်သာ တင်းတင်းကြပ်ကြပ် ရေးသားခြင်းဖြစ်သည်။ သာမန်ခရစ်ယာန်များ အတွက် တစ်မျိုး၊ အမှုတော်ဆောင်များအတွက် တစ်ဖုံ လိုက်နာရန် နှစ်ပိုင်း ပိုင်းခြားထားဟန် ရှိသည် ဟုယူဆ ကြသည်။
This entry was posted on February 8, 2012 by thawngno in Articles Bible Study, Rev. Dr. Simon Pau Khan En.	Shortlink